Ny Bahaisma na Baha'isma na Finoana baha'i na Finoana bahay dia finoana abrahamika mahaleo tena nentin'ny irak'Andriamanitra iray antsoina hoe Baha'u'llah. Fivavahana monoteista ny finoana bahay. Baha'i na Bahay no iantsoana ireo mpanara-dia ity finoana ity. Mandala ny maha tokana an'Andriamanitra ny Baha'i. fivavahana abrahamika mitory ny maha iray ara-panahy ny olombelona rehetra ny finoana bahay. Ny mpino bahay dia milaza ny tenany ho mpikambana amina "fivavahana mahaleo tena" .
Ilay Persana atao hoe Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892), izay atao hoe Baha'u'llah taty aoriana, no nanorina ny finoana bahay tamin'ny taona 1863. Ny anarana hoe Baha'u'llah dia midika hoe "Voninahitr'Andriamanitra" izay atao amin'ny teny arabo mitovy dika amin'io hoe Bahāʾ-Allāh. Mpianatr'i Bahāʾ-Allāh ny mpino bahay. Ny finoana bahay dia manana foibetoerana mihoatra ny 100000 eran-tany ka ao Haifa no foibeny fara tampony. Tamin'ny taona 2011 dia niisa 7.000.000 any ho any ny mpino bahay izay avy amin'ny vahoaka na foko 2100 samihafa miparitaka amin'ny firenena 189 . Ny ivotoerana ara-panahy, izay nanaovana fivahiniana masina (ziyarat) sady ivotoeran'ny fitantanan-draharaha dia ao Haifa sy ao Acra any Israely.
Tantaran'ny finoana bahayHanova
Tamin'ny fiantombohan' ireo taona 1790 tao Iràna dia teraka ny fikambanana shiita tia zava-miafina sy mihambo ho manam-pifandraisana mivantana amin' Andriamanitra notarihin' i Šayḫ Aḥmad Aḥsāʾī. Ny mpianany, atao hoe shaykhi, dia nanorina ny fampianarany tamin'ny lafiny metafizikan'ny shiisma sady nitsikera ny fiankinan'ny mpitondra fivavahana maro anisa tafahoatra amin'ny lalàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahaisma&oldid=997302"
Dernière modification le 21 Septambra 2020, à 14:03
Voaova farany tamin'ny 21 Septambra 2020 amin'ny 14:03 ity pejy ity.